स्वास्थ्य समाचार अपडेट - Page2of 106 - Koshi Online
यस्ता छन् बास्मती चामल खानुको फाइदा
२९ आश्विन २०७४, आईतवार १६:१५
विराटनगर, असोज २९ बास्मती चामल, बस्न जति मिठो छ यसको फाइदा पनि त्यतिनै रहेको छ । भात, नेपाली खानाको एउटा पहिचान हो । नेपाली जहाँ गए पनि भात खान भने बिर्सिने गर्दैनन् । नेपालमा धेरै प्रकारको चामलको भात पाइन्छः बास्मती चामलको भात, सेतो…
डन्डीफोरले तनाब दियो ? यसो गर्नुस्
२९ आश्विन २०७४, आईतवार १५:३५
विराटनगर, असोज २९ मानिसको शरीरमा हुने रौँको फेदमा स–साना प्वाल हुन्छन्। रौँको जरामा जोडिएर बसेको एक प्रकारको ग्ल्यान्ड हुन्छ। यो ग्ल्यान्डले छालालाई चिल्लो बनाउने विशेष प्रकारको रस उत्पादन गर्छ। जुन बेला रौँको जरामा रहेको प्वाल बन्द हुन्छ,…
डिप्रेसन के हो ? कसरी बच्ने ?
२८ आश्विन २०७४, शनिबार १५:५८
पुष्पा थपलिया करिब ३० वर्षका एक मानिस कार्यालय जाने तयारी गर्दैथिए । उनले भान्छाकोठामा प्याज राख्ने ठाउँबाट खसेको ‘एक्लो’ प्याज देखे । त्यो प्याज उनले टिपे तर राख्ने ‘उचित’ ठाउँ भेटेनन् । जता राख्दा पनि अशोभनीय लागेपछि उनले त्यसलाई कोटको…
हस्तमैथुन गर्नु ठीक कि बेठिक ? एकपटक यो पढ्नुहोस्
२८ आश्विन २०७४, शनिबार १५:५४
मेरो उमेर अहिले ३५ वर्ष भयो । विवाह गरेको १० वर्षभन्दा बढी भयो । मेरो सेक्स लाइफ सामान्य छ । न त पत्नीबाट म असन्तुष्ट छु न त उनी नै मबाट असन्तुष्ट भएको मलाई लागेको छ । तर पनि पछिल्लो समय इन्टरनेटका कारण हस्तमैथुनको बानी परेको छ ।…
के तपाई जुत्ता लगाउदा मोज लगाउनु हुन्न ? साबधान यस्तो हुनसक्छ
२७ आश्विन २०७४, शुक्रबार १६:०९
विराटनगर, असोज २७ जुत्ता खुट्टाको सुरक्षा तथा फेसन दुनियाको एउटा अलग पाटो हो । लुगा जति राम्रो लगाएपनि खुट्टा खाली छ भने त्यो लुगा अपुरो देखिने गर्छ । जुत्ता मानिसले आरम तथा सुरक्षाको लागि खुट्टामा पहिरिने बस्तु हो । जुत्तासंगै हामी मोज…
के हो क्लस्टर हेडेक ? यस्तो छ लक्षण
२७ आश्विन २०७४, शुक्रबार १३:३०
विराटनगर, असोज २७ क्लस्टर हेडेक, अजिब नाम भएको यो रोग एउटा अत्ति नै पिडादायिक रोग हो । यो रोग लागेको मान्छे हरेक दिन पिडाबाट गुज्रिने गर्दछ । दुनियामा अनेकौ खतरनाक रोग रहेका छन् । यी बिचमा क्लस्टर हेडेक पनी एक अनौठो तर भयङ्कर किसिमको रोग…
मासु खानु हुन्छ : यस्ता बेफाइदाको बारेमा पानी जानी राख्नुस्
२७ आश्विन २०७४, शुक्रबार १२:४८
विराटनगर, असोज २७ मासु भन्ने बितिकै मासु प्रेमीको मुख रसाउन थाल्छ । तर यो स्वादिष्ट भएपनि स्वास्थ्यका लागि यो हानिकारक नै हुन्छ । महाभारतमा मासु नखाने मानिसले १०० यज्ञ गरेबराबरको पुण्य पाउने उल्लेख गरिएको छ ।हिन्दू धर्मशास्त्रले पनि मासु…
के तपाइलाई स्तन क्यान्सर भएको त छैन ? यस्ता छन् लक्षण
२६ आश्विन २०७४, बिहीबार १४:५७
विराटनगर, असोज २६ स्तनमा भएका कोष–कोषिकामा असामान्य परिवर्तन आई तिनीहरूको अनियन्त्रित तथा अनावश्यक वृद्धिबाट बन्ने गिर्खा, गाँठागुँठी र निको नहुने घाउलाई स्तन क्यान्सर भनिन्छ । त्यो प्रक्रिया क्यान्सर नहुने वा हुने दुवै प्रकृतिको हुनसक्छ ।…
कतिपय मानिसहरु जे गरेपनि मोटाउन सक्दैनन् : असली कारण यस्तो
२६ आश्विन २०७४, बिहीबार १३:२४
विराटनगर, असोज 26 हामी दिनमा कैयो पटक खान्छौ । जति खाँदापनि मोटाउन सक्दैनौ । तर, तपाईंको तौल बढेको छैन भने तपाईंको अस्वस्थकर दिनचर्या वा कुनै स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या यसका लागि जिम्मेवार हुनुपर्छ । यस्तोबेलामा के गर्ने ? यसबारे यसो भन्छिन…
आश्चर्यजनक रोग तुरेत सिन्ड्रम के हो ?
२६ आश्विन २०७४, बिहीबार ११:३१
विराटनगर, असोज २६ संसारमा अनेकौ किसिमका रोग र भाइरसले ठाउँ ओगटी रहेको बेला अहिले एउटा नयाँ किसिमको रोग फेला परेको छ । भनिन्छ, मानब शरीर एउटा रहस्यले भरिएको प्राणी । शरीरभित्रका अनौठा कुराले हामीलाई तीनछक्क पार्छन् । अहिले हालसालै मात्र…